သစ္စာအလင်း: July 2015
ကြင်နာတတ်သော နှလုံးသား ( အင်းတော်ကြီးဒေသ)
အင်းတော်ကြီး ကန်ရိပ် ခိုနေတဲ့ ရွာပတ်ပတ်လည် ၈ ရွာ ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာ ရင်း တတိယရွာ အရောက်မှာ တောင်သူပညာပေး ဟောပြောပွဲ လေးပါ ဒေသခံ များကတောင်းဆို တာမို့ ကျန်ရွာများမှာဆက်တိုက် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
စိုက်ရေး ပျုိးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ၊ အစားအစာများ ဘေးကင်းရေး ၊ အဟာရဓာတ်ပြည့်ဝအောင်နေထိုင်စားသောက်နည်း တွေ ၊ သဘာဝမြေသြဇာပြုလုပ်နည်းတွေ…… ပြော ပြလိုက်တာ…. ဝေးကွာ နေတဲ့ သွေးသားရင်းချာ တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စီကာပတ်ကုံး ပြောပြ တာကိုနွေးထွေးစွာ နားထောင်ကြ သည့်နှယ် ဆက်ဆံကြတာမို့ ကျွန်မ မှာလည်း မောမှန်းမသိ ပန်းမှန်းမသိ… နာရီများပင်မကြည့်မိ။
မိုးထဲ လေထဲ..ရေထဲ ..လှိုင်းထဲ..ရွှံထဲ ဗွက်ထဲ ရုန်းကန် လှည့်လည် လိုက်တာ…….။
စကားလုံး များမှတဆင့် ဈာန်ဝင်စားကာ တောင်သူများ လူစုခွဲရန်ပင် ခက်ခဲခဲ့ ရသော အမှတ်တရ နေ့ရက်များ ..။
စကားဝိုင်းတွေမှာ ပြောရင်း ဆိုရင်း နဲ့ ကျွန်မမှာ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုး Lactobacillus ဒိန်ချဉ်ပိုး အကြောင်း ပြောမယ် ကြံစည် တာမို့ ဒိန်ချဉ်သောက်ဘူးလား မေးလိုက်တာ…။တောင်သူအကုန်လုံး တစ်ညီတစ်ညာ တည်းဖြေကြတာ…. ဒိန်ချဉ် မပြော နဲ့ နွားနို့ ပင် မသောက်ဘူးပါ တဲ့..။
ဒီဒေသ မှာ အခြားဒေသ ထက်စာရင် နွားအုပ်တွေ ကိုလမ်းတွေ ပေါ်မှာ သွားလာနေတာ တွေ့ ရတတ်တာ.ပဲ ဘာလို့မသောက်ဘူးပါလိမ့် ပေါ့.။ လမ်းပေါ်မှာ ကား တွေ ဆိုင်ကယ် တွေက ပင် ရှောင်ရတာ မို့ သူတို့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရ ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် နွားလည်းမရှားပဲ ဘာလို့ နွားနို့ မသောက်တာလည်း မေးကြည့်တော့မှ..သူတို့ ဒေသ မှာ နွားမ ထံ မှ နွားနို့ ညှစ်ယူတဲ့ အလေ့အထ လုံးဝမရှိပါတဲ့..။ နွားနို့ဆိုတာ နွားကလေးသောက်ဘို့ ပဲ လို့ လက်ခံ ယုံကြည်ထားပါသတဲ့..။ တကယ်ပင်ထူးဆန်းလေစွ ကြင်နာလွန်းစွ ပါတကား..။
အစာထိုးသွတ် ကျွေးပြီး အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါ ဖြစ်စေပြီး မှ ကော့ညက်အရက်နဲ့ စားတတ်တဲ့ Foie Gras အစားအသောက်များ….ထုတ်ယူခံရတဲ့ ငန်းများ ........
အရှင်လတ်လတ် မီးမြှိုက်ရုံမက အော်သံမကြားရအောင် နှုတ်သီးပါ ကြိုးနဲ့ချည်ထားတဲ့ Yulin Dog များ......
စားသောက်ဆိုင် တွေရဲ့ စားပွဲခုံအောက်မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြိုးချည် ခံ ထားပြီး မှာ ခေါင်းကို တူထု ပြီးအခွဲခံ ဘို့ အသင့်စောင့်နေရတဲ့မျောက် ကလေး များ .....
နေ့စဉ် အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ Factory Animals များကို.....
ကယ် တင်ခွင့် ရလျှင်တော့ ကြင်နာတတ်သော ဒေသခံများ ပူးပေါင်း ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ အင်းတော်ကြီးဒေသ ရဲ့ ဇီဝအ၀န်းအ၀ိုင်း မှာ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခွင့်ရစေချင်စမ်းပါဘိတော့တယ်..။
*** ဤစာစုဖြင့် ကျွန်မချစ်ခင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အင်းတော်ကြီးဒေသ သို့ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:10 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား က ဟောဘူးတယ်..။
စိတ်မှီတဲ့နေရာ က ဘ၀င် တဲ့...။
လူတွေ နိုင်ငံခြား မှာ နေ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဟိုတယ် တွေ ..ဈေးကြီး တွေ တိုက်တာ အဆောက်အဦတွေ..အစားအသောက်တွေ သုံးဆောင်ခံစား ရတဲ့အခါ စိတ်မှီတဲ့ ဘ၀င်မှာ စွဲထင်နေတတ်တယ် တဲ့...။
တကယ့်လက်တွေ့ တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်နေရတာ ကတော့ ဘ၀ တဲ့...။
မြန်မာပြည် ပြန်လာ တဲ့ အခါ လက်တွေ့  ဘ၀ ကို ပြန်တွေ့ တဲ့အခါ ..
ဘ၀ နဲ့ ဘ၀င် က ကွာ ဟသွားတယ် တဲ့.. ဘ၀ ကနိမ့် တဲ့အခါတိုင်း....
ငါတို့ စလုံး မှာ က..ဒီလို
ယူအက်စ် မှာ က ဒီလို မဟုတ်ဘူး..
အင်္ဂလန် မှာ က ဘယ်သို့ ဘယ်ချမ်းသာ... စသည်ဖြင့်
ဘ၀င်က အမြင့် မှာ ရောက်သွား တာ...
ဘ၀ ကနိမ့်ပြီး ဘ၀င်က အမြင့်မှာ မို့..
ဘ၀င်မြင့်တယ် ဆို တာ ဖြစ်လာတယ် တဲ့..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သို့ ၈၁နှ...
Dr. Masaru Emoto and Love Energy ( သို့ မဟုတ် ) မေ...